Git Sangit News » युवतीहरु किन बिबाह भएको पुरुषसँग बढि आकर्षित हुन्छन ? यस्ता छन कारणहरु,
युवतीहरु किन बिबाह भएको पुरुषसँग बढि आकर्षित हुन्छन ? यस्ता छन कारणहरु,
एजेन्सी । हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खालको होस् भन्ने चाहान्छन, त्यसैले महिला हरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन । तर कोहि महिला भने बिहे भएको पुरुष लाइ बढि मन पराउने गर्दछन हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ ।
केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नै हुने गर्दछन् । खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ
प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १३:४२